“သေပြီးနောက် အကြောင်း ဗုဒ္ဓဘုရား မဟောကြားခဲ့ပုံ” သုတ္တံတရားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “သေပြီးနောက် အကြောင်း ဗုဒ္ဓဘုရား မဟောကြားခဲ့ပုံ” သုတ္တံတရားများ
Posted by Kotrue on Jan 24, 2012 in Copy/Paste |4comments
ယနေ့မြန်မာထေရ၀ါဒလောကမှာ ဗုဒ္ဓဘုရားမဟောကြားခဲ့သော သေပြီးနောက် တမလွန်၌ ပြန်ဖြစ်သေးသည်ဟူသော အယူများကို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်း တက်ညီလက်ညီ ဟောကြားနေကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဟောကြားမှုကိုသာ နားကြားခွင့်ရသော တကာ၊ တကာမများကလည်း ထိုဘုန်းတော်ကြီးတွေဟောကြားနေတာတွေသည် ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဟောကြားချက် တွေလို့လည်းပဲ ယုံကြည်နေကြရပါသည်။ သေပြီးနောက် တမလွန်၌ပြန်ဖြစ်သေး သည်ဟူသော အယူများသည် ဂျိန်းဘာသာ၏ အယူဝါဒသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျိန်းသာသာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲသို့ ကူးပြောင်းလာသည့် ဘုန်းကြီးတချို့မှ ဗုဒ္ဓဘာ သာတရားများထဲသို့ ဗုဒ္ဓဘုရားပဲဟောခဲ့သလိုနဲ့ သွတ်သွင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(အကျယ်သိလိုပါက ဂျိန်းကံနှင့် ဗုဒ္ဓကံစာအုပ်)download တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။)
ဗုဒ္ဓဘုရား၏ တရားဂုဏ်တော် (၆) ချက်နဲ့မညီသော သေပြီးနောက် တမလွန်၌ ပြန်ဖြစ်သေးသည်ဟူသော အယူများသင်ကြားခံခဲ့ရမှုတို့ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတို့သည်
မကောင်းမှုတွေကို ရှောင်ကျဉ်ကြသည့်အခါမှာ ထိုမကောင်းမှု၏ လုပ်သူကို ယခုချက်ခြင်းကိုပဲ ဆိုးဝါး၊ ပျက်ဆီး၊ နှိက်စက်နေပုံကို မသိမြင်ကြတော့ပဲ၊ နောင်ဘ၀မှခံရမည်ဟု နားလည်နေကြကာ မကောင်းမှုကို ထင်သလောက် မကြောက်ကြတော့ပါ။
ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သည့်အခါမှာလည်း လောကအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးများသည့် ကုသိုလ်မျိုးတွေကို မလုပ်တတ်ကြတော့ပါ။ နောင်ဘ၀ကောင်းစားရေးအတွက်ဟုဆိုကာ စိတ်ကူးယဉ်ကြံဆလုပ်ကိုင်ကြမှုတို့ကြောင့် လုပ်သလောက်အကျိုးမများပဲဖြစ်နေကြရပါသည်။
ထို့ကြောင့် “ဗမာတွေလောက်လှူတာ ဗမာတွေပဲ၊ မွဲနေတာလည်း အဲဒီဗမာတွေပဲ”ဆိုတာသည် ဗုဒ္ဓမဟောခဲ့သည့် သေပြီးနောက် တမလွန်၌ ပြန်ဖြစ်သေးသည်ဟူသော စိတ်ကူးယဉ်အယူများကို သင်ကြားခံခဲ့ရလို့ ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် သေပြီးနောက် တမလွန်၌ ပြန်ဖြစ်သေးသည်ဟု ယူထားသူများသည် အထက်ပါကဲ့သို့ တောင်လွဲ မြောက်လွဲ အလုပ်များကြောင့် အကျိုးမများရသလို၊
သေပြီးနောက် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟု အတွေးအကြံက သေပြီးနောက်ကို ရောက်နေပါကလည်း ထိုသူသည် သူထင်ရာမကောင်းမှုနေတွေကို လုပ်ချင်ရာလုပ်ဖို့ ၀န်မလေးတော့ပါ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူယခုပစ္စုပ္ပန် ပြုလုပ်မိနေသော မကောင်းမှုရဲ့ ဆိုးဝါး၊ ပျက်ဆီး၊ နှိက်စက်နေပုံကို မသိမြင်ပဲ သေပြီးနောက်ကိုပဲ အာရုံရောက်နေလို့ဖြစ်ပါသည်။
သေပြီးနောက် ဖြစ်/ မဖြစ် တစ်ခုခုကို ယူစွဲနေကြပါက ထိုအယူအစွဲသည် ထိုသူကို ပျက်ဆီးစေတယ်၊ ဆင်းရဲစေတယ်၊ အချီးအနှီးဖြစ်စေပါသည်။ ထိုကြောင့် ဗုဒ္ဓဘုရားက
ထိုအယူများကို မယူကြဖို့ အောက်ပါ သုတ္တံများတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ဟောပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအယူများကို ယူစွဲနေကြပါက မိမိတို့ ယခုပစ္စုပ္ပန်လုပ်ကိုင်နေကြသော အလုပ်များ၏ ကောင်း၊ မကောင်း တန်ဘိုးအမှန်ကို မသိနိုင်ကြတော့ပဲ စိတ်ကူးယဉ်စိတ္တဇများဖြင့်သာ လုပ်နေကြပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ကူးယဉ် အတွေးအခေါ်များဖြစ်သည့် သေပြီးနောက် ဖြစ်သေးသည်/ မဖြစ်တော့ဘူးဟု ကြံဆမှုများကို ပယ်ဖျောက်ကြကာ မိမိတို့ ယခုပစ္စုပ္ပန် လုပ်ကိုင်၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်ကြသည့် အပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓ၏သမ္မာမဂ္ဂင် (၈) ချက် လမ်းညွှန်ချက်မြင့် အပြော မှန် (သမ္မာ)လာအောင်၊ အပြု မှန် (သမ္မာ)လာအောင်၊ အနေ မှန် (သမ္မာ)လာအောင် အတွေးမှန်၊ အသိအမြင်မှန် စိတ်ထားတို့ဖြင့် နိုးနိုးကြားကြား ကြိုးစားကြဖို့လိုပေသည်။
ယခုပစ္စုပ္ပန် လုပ်ကိုင်၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်ကြသည့်အပေါ် တန်ဘိုး အမှန်အတိုင်းသိမြင်မှ သာလျှင် တကယ့်ကောင်းမှုများကို သိမြင်ရှောင်ရှားတတ်လာပြီး၊ တကယ့်ကောင်းမှုများကို လုပ်ကိုင်တတ်လာကြမှာဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့ကြောင့် စစ်မှန်သောဗုဒ္ဓတရားကို ကျင့်သုံးလိုက်နာကြသူများဖြစ်ကြစေရန်အတွက် ဗုဒ္ဓဘုရား မဟောကြားခဲ့သော၊ မယူခဲ့သော သေပြီးနောက်၊ ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀ (စိတ်ကူးယဉ်) အယူဝါဒများကင်းစင်ကြဖို့လိုပေသည်။
(ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏ၊ ဂျိန်းရဟန်းအဖြစ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲရောက်လာခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီးတချို့က သမုတိသစ္စာအရ ဘယ်လို ယူရတယ်၊ ပရမတ္တသစ္စာနည်းအရ ဘယ်လိုနားလည်ရသလို ဟု စကားများ ရှုပ်ထားခဲ့ကြသလို ထိုနောက်လိုက် အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတချို့ကလည်း ကြံဆပြီး တွေးလုံးများဖြင့် သုတ္တံနည်းအရ ဘယ်လို၊ အဘိဓမ္မာနည်းအရ ဘယ်ပုံယူရတယ်စသည်ဖြင့် ဟိုလိုတစ်မျိုး၊ ဒီလိုတစ်မျိုး အမျိုးမျိုးထင်ရာရှောက်ပြောနေကြပေသည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် စကားလည်း မရှုပ်တတ်သလို၊ ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုးလည်း မပြောတတ်ပါ။ အရိယသစ္စာဆိုတဲ့ သမုတိသစ္စာအစွန်းလွတ်သော၊ ပရမတ္တသစ္စာအစွန်းလွတ်သော တစ်မျိုးတည်းသော လူ့အမှုသစ္စာကိုသာ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။)
ဗုဒ္ဓ၏ အရိယသစ္စာကို သိလိုပါက www.ariyathitsa.org တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
View all posts by Kotrue →
(ယခုပစ္စုပ္ပန် လုပ်ကိုင်၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်ကြသည့်အပေါ် တန်ဘိုး အမှန်အတိုင်းသိမြင်မှ သာလျှင် တကယ့်ကောင်းမှုများကို သိမြင်ရှောင်ရှားတတ်လာပြီး၊ တကယ့်ကောင်းမှုများကို လုပ်ကိုင်တတ်လာကြမှာဖြစ်ပါသည်။) တွင်
တကယ့်ကောင်းမှုများကို သိမြင်ရှောင်ရှားတတ်လာပြီး၌ “မ”သတ်ပုံကျန်ခဲ့ပါ၍ “တကယ့်မကောင်းမှုများကို သိမြင်ရှောင်ရှားတတ်လာပြီး၊”ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းပန်အပ်ပါသည်။
တကယ်တော့ သေပြီးနောက်နဲ့စပ်ပြီး ဘာကြောင့်မဟောတာလဲဆိုတာကလဲ အရိယသစ္စာဒဿန မမြင်ရင် နားမလည်နိုင်ဘူးဗျ၊ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓက လူ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလည်း အရေးတယူလုပ်ပြီးမပြောသလို၊ လူတွေ သေပြီးနောက် ဖြစ်၊ မဖြစ်တို့လည်း မပြောပါဘူး။ ဒါကို ဒီကနေ့ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက နားမလည်နိုင်ပါဘူးဗျာ၊ ဒီနေ့ တရားစကားဆိုရင် သေပြီးနဲ့ ဟိုဘက်ဘ၀၊ ဒီဘက်ဘ၀ မှ မပါရင် တရားစကားတောင် မပြောတတ်သလိုဖြစ်ပြီး၊ ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ ပြောတဲ့ တရားဆိုရင်လည်း ဒါဟာ တရားမဟုတ်တဲ့(မတရား) အဓမ္မလို့ လုပ်ချင်သူတွေက ခပ်များများ ဖြစ်နေတာတော့ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာပါပဲဗျာ။ အခုလို သုတ်အမှတ်စဉ်နှင့်တကွ ဖော်ပြပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အများဆုံး နားမလည်နိုင်ပဲ အလွယ်သိနေတဲ့ ဝေါဟာရတွေက အဓိပ္ပာယ်လွှဲမှားသိနေကြတာတွေ များစွာရှိပါတယ်။
ဒုက္ခ ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ဒုက္ခဟာ ဒုကမ္မလား ဒုကရလား ကွဲပြီး မသိပါဘူး။
ဘ၀ ဆိုရင်လည်း ယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀ စသည်ဖြင့် ဒါကို ဘုရားဟောတာလား၊ လူ၏ ကံမှားတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လူ့အဖြစ်ရရှိမှုပြောင်းလဲချက်ကို ဘ၀ အဖြစ် ဘုရားဟောတာလား ကွဲပြီး မသိကြပါဘူး။
ဂျိန်းအနွယ်ဝင် ကျွန်းကလေးပေါ်မှာ နေကြတဲ့ ဗဟုသုတ ခေါင်းပါးလှသော သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးများ ဖွင့်ဆိုမှု အဋ္ဌကထာတွေ ယုံစားနေကြဦးမယ်ဆိုရင်တော့ – – – – ။
ဘုရားဟောနဲ့ အဋ္ဌကထာ သင်းတို့ ဘယ်ဟာ ရွေးမည်နည်း။
“Samsara” (သံသရာ) is the Sanskrit word for “illusion.” It refers to the suffering associated with the incessant rounds of rebirth created by karma, or the law of cause and effect. This is the basic predicament behind Hinduism, Buddhism, the Bon religion of Tibet, Jainism, and Sikhism.
Such grand religious formulations are out-picturings of very personal human dilemmas that everyone struggles with, regardless of their religious preferences. From time to time all of us feel trapped in the drama of life, victims not only of our own poor decisions and delusions, but of our social, cultural, and biological worlds. How to get out? What to do? Each Indian religion has its own answer. For Hinduism, Jainism, and Sikhism it is to take upayoga and seek moksha, or liberation (mukti in Sikhism). Buddhists follow the Eight-Fold Noble Path and seek nirvana, the cessation of all cravings.